Gandaki Sanchar » नेवि संघको सिद्धान्तलाई जीवन्त दिन र सांगठनिक सुदृढिकरणका लागि मेरो उम्मेदवारी
नेवि संघको सिद्धान्तलाई जीवन्त दिन र सांगठनिक सुदृढिकरणका लागि मेरो उम्मेदवारी
नेपाली काँग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघको अधिवेशन नजिकिए सँगै पर्वतमा शिशिर शर्मा पौडेललको चर्चा चुलिएको छ । पौडेल गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका इकाई सभापति हुन् । त्यस्तै नेवि संघ पर्वतका जिल्ला सदस्य समेत रहेका छन् । नेवि संघ भित्र कर्मष्ठ, वैचारिक, नेतृत्व क्षमता भएका नेताका रुपमा हेरिने पौडेलको चर्चा पर्वतका अन्य विद्यार्थी नेताको भन्दा फरक छ । स्थानिय र प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन पश्चात पार्टी आएको विकरल अवस्थामा पौडेलले गरेका राम्रा कामले विद्याथीहरुको ‘के्रज’ ह्वत्तै बढेको छ । विद्यार्थी नेता,कार्यकर्ता देखी काँग्रेस नेताहरुले पौडेललाई अध्यक्ष बनाउनुको विकल्प नरहेको तर्क गरेपछि छन् । अहिले अधिकाँश विद्यार्थीको रोजाईमा पौडेल परेपछि नेताहरु पनि यो बिषयमा मौन छ । उनको चर्चा पर्वतमा मात्र होईन देशभर चुलिएको छ । नेपाल विद्यार्थी संघको राजनितिमा सक्रिय पौडेल जिल्लाका सबै वडामा शैक्षिक कार्यक्रम लिएर पुगेका छन् । सबै विद्यार्थीले पौडेललाई अध्यक्ष बनाउन पर्छ भन्ने आवाज उठाएपछि अन्य विद्यार्थी नेता पनि मौन छन् । पार्टीले लिएको आन्तरिक सुझावमा पनि उनी एक नम्बरमा परेको काँग्रेस श्रोतको भनाई रहेको छ । उनलाई अध्यक्षको दर्बिलो उम्मेदवारको रुपमा पर्वतमा हेरिन्छ ? यस बारेमा हामीले उनसंग कुराकानी गरेका थियौं ।
मलाई साथीहरूले पत्याएको र साथीहरूको रोजाईमा परेको संगठनमा आफूले पाएको सफलता र आफ्नो क्षमताको आधारमा
म सभापतिको लागि आकांक्षी छु ।
तपाई सभापति हुन्छ जस्तो लाग्छ ?
म विद्यार्थीहरुको दुख सुखमा भिजेर हिँडेको मान्छे हुँ । त्यसैले पनि विद्यार्थी राजनीतिमा मेरो जित्ने आधार प्रशस्तै छन् । त्यसैले म नै नेवि संघ पर्वतको अध्यक्ष हुँ भन्ने मेरो धारणा छ । म विगत लामो समयदेखी विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय छु । नेपाल विद्यार्थी संघमा लामो समयदेखी काम गदै आएको छु । विद्यार्थीका समस्या बिषयमा म पूर्ण जानकार छु । अहिलेको आवश्यकता भनेकै सबल र सक्षम नेतृत्व हो । त्यसैले सक्षम नेतृत्वको लागि मै नै सभापति हुँ ।
म विद्यार्थीहरूसँग उनीहरूको सबै दुख सुखमा भिजेर हिँडेको मान्छे हुँ । त्यसैले पनि विद्यार्थी राजनीतिमा मेरो जित्ने आधार बलियो रहेको छ । त्यस्तै दोस्रो कुरा त शैक्षिक योग्यताको कुरामा पनि म क्यापेबल रहेको छु । मेरो त मान्यता के छ भने विद्यार्थी राजनीति गर्ने भनेको एकेडेमिक मान्छेले मात्रै हो । त्यो बाहेकका मान्छेले विद्यार्थी राजनिति होइन अन्य क्षेत्रमा पनि राजनिति गर्न गए हुन्छ । तर विद्यार्थी राजनीतिको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षित पृष्ठभूमि मसँग रहेको छ । मैले थुप्रै काम गरेको छु । यस्तै कारणले पनि मेरा जित्ने आधारहरू धेरै रहेका छन् ।
अन्य अध्यक्षका आकांक्षीहरूमा भन्दा तपाईमा कस्तो भिन्नता छ ?
नेपाल विद्यार्थी संघको अधिवेशन नजिकिदै आएको छ । पर्वतमा धेरैसाथीहरू यसका आकांक्षी बन्नुभएको छ । यो स्वभाविक पनि छ किनभने लामो समयसम्म आफ्नो क्षमता पोख्न नपाएका हामीहरू अध्यक्षको लागि आकांक्षी बन्नुमा मैले कुनै नौलोपना देखेको छैन । एउटा संगठनमा काम गरेपछि हामी अध्यक्ष बन्ने आकांक्षा सबैले राख्नु स्वभाविकै पनि छ । तर, म चाहिँ अरू मध्ये पनि आफूलाई स्वभाविक किन मान्छु भने अब हामी काँग्रेसमा आस्थावान व्यक्तिहरुले काम गर्ने मान्छेलाई नेतृत्वमा लिनुपर्ने आवश्यक छ । वि संघ सहित पार्टीलाई जिवन्त दिने क्षमता म सग छ । तपाईहरुले हेदै आउनु भएको छ मेरा गतिविधी । त्यसैले पनि मेरो उम्मेदवारी एक हिसावले स्वभाविक मान्न सकिन्छ । अर्को कुरा त मेरो संघर्षशीलता र इमान्दारिताको राम्रो लेखाजोखा सबै साथीहरूले गरेका छन्। त्यसैले मेरो उम्मेदवारी अरूको भन्दा भिन्न रहेको छ । र साथीहरूले यसै कारणले गर्दा पनि मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मैले सोचेको छु।
तपाईँको उम्मेदवारी अन्तिम समयसम्मको लागि हो कि वार्गेनिङ गरेर बीचैमा छोड्नुहुन्छ < म कुनै वार्गेनिङ गर्नको लागि उम्मेदवारीको नाटक गर्ने मान्छे होइन । म संगठन बनाउन सबै वडामा पुगेको छु । मैले साथीभाईहरुका भेट्दा साथीहरूको मानसिकता बुझ्दा मलाई झनै बढी उत्साह थपिएको छ । मेरो पक्षमा कति धेरै साथीहरूको रूची र संलग्नता रहेको छ भन्ने देखेपछि त मेरो जित नै सुनिश्चित जस्तै भईसकेको छ । फिर्ता को त कुरै छाडौं । बरू हार्नु कुनै ठूलो कुरा होईन । तर अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन्छु भनेर उपाध्यक्ष र सचिवमा उम्मेदवारी दिने काम मबाट हुँदैन । म नेवि संघको मुल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर हिँडेको मान्छे हुँ ।, त्यसैले पनि मेरो उम्मेदवारी एक हिसावले स्वभाविक मान्न सकिन्छ । विद्यार्थीलाई अरु केहि भन्न चाहानुहुन्छ ? म के भन्न चाहान्छु भने जिते पनि हारे पनि मैले भनेका कुरा गर्न मेरो पहल रहन्छ । तर जितेमा काम गर्न अलि सहज हुन्छ भन्ने मात्र हो । त्यसैले एकपटक मलाई विद्यार्थी वर्गहरुको काम गर्ने अवसर दिनुहोस् । म आफु पनि विद्यार्थी भएकोले विद्यार्थीहरुको भावना बुझेको छु । विद्यार्थी राजनिति सँगै पर्वत जिल्लालाई काँग्रेसमय बनाउन लाग्ने छु ।
प्रकाशित मिति २९ मंसिर २०७५, शनिबार ०३:४१